१५ वटा विश्व रेकर्ड एक्लै कायम गर्दै नेपालको स्वाभिमान उच्च राख्ने थानेश्वर गुरागाईं (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
१५ वटा विश्व रेकर्ड एक्लै कायम गर्दै नेपालको स्वाभिमान उच्च राख्ने थानेश्वर गुरागाईं (भिडियो)
June 27, 2017	958 Views
विश्व रेकर्ड राख्नैको लागि जन्मिएका विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने थानेश्वर सबै युवाहरुका प्रेरणाका स्रोत हुन ।
सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी नागरिक हग बेभरले गिनिज बुकको अवधारणा ल्याएका हुन् । संसारका कीर्तिमान वा उदाहरण प्रमाणित भएपछि गिनिज वल्र्ड रेकर्डस्ले प्रमाणपत्र दिन्छ ।
गिनिज बुक अफ अफ दी रेकर्डसमा धेरै नेपलीहरुले नाम लेखाउन सफल भएका छन् । विभिन्न कीर्तिमानी तोड्दै नेपालीहरु गिनिज बुक अफ दी रेकर्डसमा नाम लेखाउन सफल भएका हुन् यसमा सबै भन्दा बढी रेकर्ड इटहरीका थानेश्वर गुरागाईंले राखेका छन् नेपालबाट !
थानेश्वर गुरागाई कहलिएको नाम हो । अनुहारले कमैले चिनलान् तर नाम भन्ने वित्तिकै उनलाई नचिन्ने मान्छे कमै हुन्छन् । खनार घर भएका २६ बर्षिय प्रतिभाशाली यी युवा देश तथा विदेशमा परिचित छन् । १४ वटा फरक फरक विधामा गिनिज बुक अफ वल्ड रेर्कडस्मा आफ्नो नाम लेखाउन सफल रहेका उनै थानेश्वर माघ महिनामा पुनः चर्चामा आए । थानेश्वरले १५ औँ वल्ड रेकर्डका लागि प्रफोमेन्स गरेसँगै एकाएक चर्चाको उचाईमा पुगे । काठ काट्ने चेन मेसिनलाई आफ्नो चिउँडोले ५ मिनेट ७ दशमलव ७७ सेकेण्ड सम्म आकाशमा ठ्याएर सवैलाई अचम्मति बनाउँदै उनले नयाँ रकर्ड बनाए । इटहरीको विश्व आर्दश कलेजमा गरिएको प्रस्तुतीमा उनले ७ केजी तौल भएको चेन मेसिनलाई चिउँडोले लामो समय सम्म अड्याएका थिए । विश्वमा त्यति तौलको चेन मेसिन १ मिनेट सम्म मात्रै ड्याएको रेकर्ड कायम रहेको उनले बताए ।थानेश्वरले भने भएकै रेर्कडको भन्दौ झण्डै चार गुना बढि समय सम्म ड्याएका छन् । उनको यो रर्कड गिनिज वुकले रेकर्ड गरेपछि औपचारिक रुपमै १५ औँ रेकर्ड हुनेछ । विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने थानेश्वरसबै युवाहरुका प्रेरणाका स्रोत हुन ।
कृतिमानी थानेश्वरको नाममा रेकर्ड्स भएको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको १४ रेकर्ड्स हेर्नुस
सुनसरी खनारका २६ वर्षीय थानेश्वर गुरागाईंले १४ विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनका सबै कीर्तिमान खेलकुदसँग सम्बन्धित छन् । १. एक मिनेटमा सबैभन्दा धेरै (४४४) पटक बास्केटबल बाउन्स गराउने, २. टेनिस र्‍याकेटको जाली झिकेको प्वालबाट एक मिनेटमा ३८ पटक जिउ छिराउने, ३. टेनिस र्‍याकेटको प्वालबाट तीन मिनेटमा ९६ पटक जिउ छिराउने, ४. टेनिस र्‍याकेटको प्वालबाट ३० सेकेन्डमा २२ पटक जिउ छिराउने, ५. टेनिस र्‍याकेटबाट ४.९१ सेकेन्डमा तीनपटक छिरेर निस्कने |
६. एउटा हातले अर्को हातलाई बास्केटबल पास गरी ३० सेकेन्डमा ५६ पटक वृत्त बनाउने, ७. बास्केटबललाई खुट्टाको बुढीऔँलामा २० सेकेन्डसम्म घुमाउने, ८. बास्केटबललाई टाउकोमा २३ सेकेन्डसम्म घुमाउने, ९. बास्केटबललाई मुखमा राखेको टुथब्रसमा ४० सेकेन्डसम्म घुमाउने, १०. एउटा बास्केटबल मुखमा राखेको टुथब्रसमा र सँगै दुईवटा बास्केटबल दुईवटा हातमा १२ सेकेन्डसम्म घुमाउने, ११. बास्केटबललाई कुहिनोमा ६.६२ सेकेन्डसम्म घुमाउने, १२. बास्केटबललाई ७ सेकेन्डसम्म नाकमा घुमाउने, १३. गिनिज बुकलाई नै औँलामा आधा घन्टासम्म घुमाउने, १४. दुईवटा बास्केटबल दुईवटा हातमा र एउटा खुट्टाको बुढीऔँलामा १० सेकेन्डसम्म घुमाउने ।
इटहरीमा गत माघ २०७३मा गरिएको १५ औ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस |
इटहरी मै अर्को गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस
गिनिज बुकमा थानेश्वर गुरागाईको १३ औं रेकर्ड (भिडियो सहित)
गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकड्समा १३ औँ रेकर्ड बनाउने क्रममा कुहिनोमा बास्केटबल घुमाउँदै थानेश्वर गुरागाईले नयाँ रेकड राखेका छन् | हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कुहिनोमा ६.६२ सेकेन्ड बास्केट बल घुमाएर यसअघिको ६.१४ सेकेण्डको रेकर्ड तोडेका हुन् ।
फोटो साभार थानेश्वर गुरागाईंको फेसबुकबाट